YEYINTNGE(ကနဒေါ): သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
လေးစားရပါသော ဆရာဦးရဲထွဋ်ရှင့် -
ကျွန်မကတော့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန က ဒု/ဦးစီးမှူးအဆင့်ရှိ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပါ တယ်။ ဆရာဦးရဲထွဋ်ကို ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ကိစ္စတွေကြောင့် မကြာခဏတွေ့ဖူးဆုံဖူးနေ ကျဖြစ်သလို ဆရာ့ဇနီး ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းကိုလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သာရေး နာရေး ကိစ္စတွေမှာ တွေ့ဖူး ကြုံဖူး မျက်မှန်း တန်းမိနေပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ် အသုံးပြုတဲ့ ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆရာ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ် အကောင့်ကို အမြဲဝင်ရောက် ဖတ်ရှုလေ့လာ ခဲ့သလို ဆရာ့ဇနီး ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းနဲ့ ဖေ့စ် ဘုတ်ပေါ်မှာ ခေတ္တခဏ အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။
အခု ကျွန်မရေးတဲ့စာကတော့ သာမန် ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့သာ ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလေး ရက်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကို မွတ်ဆလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလို ပုံဖျက် သရော်ထားတဲ့ ဘာသာရေးအစွန်း ရောက် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မောင်ဆန္ဒ (MgSan Da) ရဲ့ပို့စ်ကို ဆရာ့ဇနီး ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့် ကနေ ရှယ်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဆိုရှယ်မီ ဒီယာ အသုံးပြုတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများကြား လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မ ကြာမီမှာပဲ အစ်မ ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းရဲ့အကောင့် လည်း ပိတ်သွားပါတယ်။ ဆရာ့ဇနီးအနေနဲ့ သာမန် အမှတ်တမဲ့ ရှယ်မိတဲ့ပို့စ်လို့ မယူဆမိပါဘူး။
သည်အကောင့်မှာ အစ်မဟာ ကိုယ်ပိုင် အမည် ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြုရုံသာမ က သူမသည် သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ ဇနီးဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဖော်ပြထား ပြီး မိသားစုဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းတင် လေ့ရှိပါသည်။
ကျွန်မ သတိပြုမိတာကတော့ ဦးရဲထွဋ်ဟာ သာမန်ဒုဝန်ကြီးတစ်ဦးသာဖြစ် မယ်ဆိုရင် ဦးရဲထွဋ်ဇနီးက ဘာကိုဘယ်လို ရှယ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း လူအများက ဂရု စိုက်မိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဆ ရာ့အနေနဲ့ သမ္မတရုံးကိုသာမက အခုအစိုးရ တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ ယခင်အစိုးရလူကြီးများကိုပါ ခု ခံပြောဆိုရတဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဆိုတာကိုလည်း သဘောရိုးနဲ့နားလည်ထားပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်မပြောချင်တာက ယခု ၃ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်နဲ့ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်တို့အကြား မ ကြာခဏ ပွတ်တိုက်မိနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ကိုလည်း ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်ကို ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားအမည်နဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့ စာတွေကို ဘလော့ ရေးသားသူဖြစ်တယ်လို့ ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေမှာ ရေးသားလေ့ရှိပြီး ဆိုရှယ် မီဒီယာအသုံးပြုသူ အများကပါ မှတ်ထင်ယုံကြည်လျက်ရှိနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ခန့်ကနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သာမန် အတိုက် အခံခေါင်းဆောင် မဟုတ်တော့ဘဲ ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ဥပဒေပြု အမတ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တာ ၂ နှစ်ကျော်ခဲ့နေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် လွှတ်တော်ရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌတစ် ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးဥပဒေမူကျမ်း ရေးဆွဲဖို့၊ ဆေးရုံများပြုပြင်ဖို့အပါအ၀င် မြန် မာနိုင်ငံကို လာရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတကာက ခေါင်းဆောင်တွေကို လက်ခံ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီလမ်း ကြောင်းပေါ် ဖြောင့်ဖြောင့်လျှောကလှမ်းနိုင် အောင် တိုက်တွန်းအားပေးမှုတွေ အလျဉ်း သင့်သလို ပြုလုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအဖြစ် သတင်းဂျာနယ်တွေ မှ ဖော်ပြ ချက်ကိုလည်း မကြာခဏ ဖတ်ရပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ဝေတဲ့ သတင်းစာများမှာပင် သူမရဲ့ ရုပ် ပုံနဲ့ သတင်းတွေကို အလျဉ်းသင့်ရင် သင့် သလို ဖော်ပြနေပါပြီ။
ဒါကြောင့်မို့ ဆရာလို အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် ဘက်မှ အရာရှိကြီးတစ်ဦးရဲ့ ဇနီးအနေနဲ့ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်ဘက်မှ အထင်ကရရှိလှ တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို လီဆယ်သရော် လှောင်ပြောင် ထားတဲ့ပို့စ်အား မျှဝေဖြန့်ဖြူး ခြင်းမှာ လွန်စွာအပြစ်ကြီးတယ်လို့ ထင်မြင် ယူဆမိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆရာ့ဇနီးဟာ မြန် မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များ အသင်းမှာ ပထမ သို့မဟုတ် ဒုတိယ ခုံတန်း မှာ နေရာရသူ လူကြီးကတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးစွမ်း ဆောင်ရှင်များအသင်း နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာလည်း အခြား အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရှင် အဖွဲ့ဝင် ၀န် ကြီးကတော်တွေနဲ့ ဖက်လဲတကင်းရှိတာကို သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ် တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကတစ်ဆင့် သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဆရာ့ဇနီးအနေ နဲ့ အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်တစ်ဦးရဲ့ ရှု ထောင့်မှနေပြီး အခြားအမျိုးသမီးများ စွမ်း ဆောင်မှုကို အားပေးရမှာ ဂုဏ်ယူရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာ မှာပင် စွမ်းဆောင်နိုင်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံ ထားရသူတစ်ဦးကို လှောင်ပြောင်ပျက်ရယ်ပြု ခြင်း မှာ ကျွန်မတို့ မြန်မာအမျိုးသမီးထုအတွက် လွန်စွာရုပ်ဆိုးစေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆရာ့ဇနီးအနေနဲ့ စစ်သားကြီး တစ်ဦးရဲ့ သမီးဖြစ်ကြောင်း စစ်သားလေးတစ် ဦးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သည်ကို ဂုဏ်ယူစွာ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ သလို စစ်သားနဲ့ စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ပျော် မွေ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ တပ်မတော် ရဲ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ် သူကိုပင် ချမ်းသာမပေး လူပုံအလယ်မှာ ပြက်ရယ်ပြု တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ကျွန်မအနေနဲ့ များစွာ အံ့သြမိပါတယ်။
လင်နဲ့မယား ဆိုတာ အသွင်တူလို့ အိမ်သူဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ အိမ်ထောင်ရှိဇနီးသည် ကျွန်မက နားလည်ထားပါတယ်။ သမ္မတရုံး အတွက်သာမက အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ ပြော ရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိကြီး တစ်ဦးရဲ့ဇနီးသည် တစ်ဦးအနေနဲ့ ဒီလိုပြုမူဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်း က ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဆရာရဲ့ သဘောထားကို လှစ်ဟပြောဆိုတာလား ဆိုတာကတော့ ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားပါတယ်။
စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်တာတွေ ရှိကြရင်တောင် ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်နဲ့ နားလည်မှုတွေကို ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းက ထပ်တူခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ ခင်ပွန်းက ချစ်တဲ့သူကို ဇနီးက လိုက်ချစ်မယ်။ ခင်ပွန်းက မုန်းတဲ့လူကို ကိုယ်ကလိုက်မုန်း မယ်ဆိုတာ ဆရာနဲ့ အစ်မတို့လို နှစ်ကိုယ်တူ ချစ်သမျှ ချစ်ခရီးလမ်းလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေ အတွက် တစ်စိတ်တည်း တစ် ၀မ်းတည်းရှိနိုင်မယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုစရာ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ပိုဆိုးတဲ့အချက်ကတော့ ဆရာ့ဇနီးက သူမရဲ့အကောင့်ကို ပိတ်ပြီး နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ သူဖြစ်တဲ့ ဆရာ့အကောင့်က တစ်ဆင့် တောင်းပန်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အပြုအမူဟာ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး တွေကို သိက္ခာကျဆင်းစေပါတယ်။
ကိုယ့် ခင်ပွန်း အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ သမ္မတရုံးတော်မှ ဂုဏ်သရေရှိ ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးကို ဇနီး ဖြစ်သူရဲ့အမှားအပြုအမူအတွက် အလွဲသုံး တောင်းပန်စေခြင်းက အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင် ရှင်တစ်ဦး ပြုလုပ်ရတဲ့အပြုအမူ မဟုတ်ဘူး လို့ ထင်မိပါတယ်။ မလျော်သြဇာကို အသုံးပြု တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒီလို တောင်းပန်လိုက်တဲ့အတွက် စဉ်းစားစရာတစ်ခု ရလာတာက ဦးရဲထွဋ်ကို ဇနီးသည် က လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားလို့လား (သို့) ဇနီးသည်ကို ဦးရဲထွဋ်က မပါနဲ့တော့ ငါပဲကြည့် ရှင်းမယ်ဆိုပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေခြင်းမျိုး လုပ်လိုက် သလားဆိုတာပါ။
ဆရာ့အနေနဲ့လည်း မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ် တာကိစ္စတွေကိုလည်း အစိုးရ သတင်းထုတ် ပြန်ရေး အတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ အကောင့်က နေ တောင်းပန်ခြင်း မျိုးပြုလုပ်ခြင်းဟာ အဆို ပါကိစ္စကို လူသိများစေပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ် ကို တစ်ပတ်တစ်ခါ နှစ်ခါလောက်သာ အသုံး ပြုသူများပင် ဆရာ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ လုပ်ရပ်ကို သတိပြုမိစေပါတယ်။
ဆရာ့ဇနီး အနေနဲ့ သူမရဲ့ အကောင့်မှ သူမကိုယ်တိုင် တောင်းပန်ခဲ့လျှင်ပင် ယခုကိစ္စဟာ အကျဉ်းရုံးပြီး သွားနိုင်မည့်ကိစ္စမျိုးဖြစ် တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ထောက်ပြချင်တာက တော့ ဆရာ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဆိုင်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မကလည်း ဆရာ့အကောင့် ကို အမြဲတစေ ၀င်ဖတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ပို့စ်တွေမှာ ၀င်ရောက် ကွန်းမန့်ပေးတဲ့ သူတွေကလည်း အတိုက်အခံတွေကို ဆဲဆို ခြင်း၊ လက်ရှိ အစိုးရအုပ်ချုပ်သူများကို ဆဲဆို ခြင်း၊ ဘာသာခြားတွေကို ဆဲဆိုခြင်း ဖိုတို ရှော့ရုပ်ပြောင်တွေ အသုံးပြုခြင်းတို့ကို အများ အပြားပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါသူများကို ဆရာအနေနဲ့ စိစစ်ခြင်း ပိတ်ပင်ခြင်း၊ သတိ ပေးခြင်းတို့ကို လုံးဝမပြုလုပ်တာကိုတွေ့ရှိရ ပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ပြန်ကြားရေး အတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ဟာ ရန်မီးများရဲ့အစလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဆရာ့ အနေနဲ့ အဲ့သလိုအပြုမူတွေကို တစ်စုံတစ်ရာတား မြစ်ခြင်းမပြုဘူးဆိုရင် ဆရာ့ ဇနီး အကောင့်ကိုလည်း ဆရာ့အကောင့်ထဲမှာ ၀င်ရေးနေကြသလို ရေးသားပြောဆိုနေတာတွေကို တန်းတူ လက်ခံပေးထားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ့အနေနဲ့ ကွန်းမန့်တွေ မစိစစ်နိုင်ရင် ကွန်းမန့်ဘောက်စ်ကို ပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ဇနီး ကိုယ်တိုင် ရေးတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုမှာ အဲဒီ အကြောင်းကို ရေးသားထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လကျော်လောက်က ဆရာ့ ဇနီးက သူမအနေနဲ့ ဆရာ့ပို့စ်များအောက် မှာ ၀င်ရောက် ဆဲဆိုထားတဲ့ ကွန်းမန့်တွေကို ဖတ်တဲ့အခါ များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ဆရာ့ကို အလုပ်ပင်ထွက်စေချင်ကြောင်း ရေးသားထားတာကို ဆရာလည်း ဖတ်ခဲ့ဖူးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ့ပို့စ်တွေမှ ကွန်းမန့်တွေကြောင့် ဆရာ့ဇနီးမှာ ဆရာ့ကို အမြဲတစေ ဝေဖန်လေ့ရှိတဲ့ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားပေးထောက်ခံနေတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ယူဇာ များကို အမြင်ကတ် မုန်းတီးရာမှ စတင်ပြီး ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါ တစ်ပါတည်း မုန်းစပျိုးမိခြင်း လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မသည်လည်း အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆရာ့ဇနီးရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်မိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆရာ့အကောင့်များမှလည်း ရန်ပွဲများမဖြစ်ပွားအောင်၊ အမုန်းစများမကြီး ထွားအောင် ပြုလုပ်သင့်သည်များကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြုလုပ်ပါလို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဆရာနဲ့ ဆရာ့မိသားစု စိတ်ချမ်းသာကိုယ် ကျန်းမာရှိပါစေ။ အခုစာကို အမည်မပါဘဲ ရေးရတာ ကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောချင်တာ မပြောရတဲ့ဘ၀ကို ဆရာ စာနာနိုင်ပါလိမ့်မယ် ယူဆမိပါတယ်။
အတွဲ (၂) အမှတ်စဉ် ၁၇၊ သည်လေဒီးစ် နယူးစ်ဂျာနယ်။
BY YeYint Nge ... 6/18/2014
မဟာသန္တိသုခကျောင်း၏ ပိုင်ရှင်အစစ်က ဘယ်သူလဲ ..... ??...
ကျောင်းသား ကိုနိုင် ငံရေး နဲ့ မပတ်သက် အောင်ခြိမ်း ...
ခေါင်းရှောင် အယ်ဒီတာချုပ်များ အလိုမရှိ
မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ ရဲမှူးး
ဦးဥတ္တရအား တရားရုံးထုတ်မည့်နေ့တွင် ဗြိတိသျှသံအရာရှ...
တစ်ထောင့်တစ်နေရာ ကနေ ဖြည့်ဆည်း
မှတ်ပုံတင်အတု လုပ်ခဲ့သည်များကို ဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်
သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲ...
“ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အာမခံချက်ပေးပါ ”
ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် အာဏာပိုင်များငြ...
သံတော်ဆင့်ဂျာနယ် တာဝန်ရှိသူများအား ခေါ်မေး